यस्तो भन्छन - जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ ( भिडियो सहित) - JanataPatra
२४ भाद्र २०७७, बुधबार २१:४७ September 9, 2020 Janatapatra
जनतापत्र संवाददाता , चौतारा ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले वालुवाको तस्कर भनेको प्रति आपत्ती जनाएका छन । पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासनकै अगुवाईमा वालुवा तस्कर भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईकै नाम जोडेर समेत संचार माध्यमहरुमा आइरहेको छ । खास कुरा केहो भन्ने सन्दर्भमा जनतापत्रले लिएकोको अन्तरवार्तामा प्रमुख तामाङले भनेका छन ,नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र विक्रीसँग जिल्ला समन्वय समितीलाई जोडिएको प्रति आपत्ती छ । नियम बिपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीमा भएका अनियमित गतिविधि रोक्न निर्माण गरेको नीति अनुरुप नियमनकारी भूमिकामा समन्वय समितिले नियमन गरिरहेको अवस्थामा ब्यक्तिगत तथा राजनीतिक तिक्तताको आशय झल्कने गरी निती बिपरीत काम गरेको भनी समन्वयात्मक भूमिकामा रहेको संस्थामा लगाईएको आरोप खेदपूर्ण रहेको वताएका छन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला निरन्तर प्राकृतिक विपत्तीमा परिरहेको छ । यस अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले खेलेको भूमिका के कस्तो भयो ? विपत्तीमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न जिल्ला समन्वय कत्तीको सफल भए जस्तो लाग्छ ? भन्ने सन्र्दभमा उनले भनेका छन जिससवाट खेलपर्ने भूमिकामा कुनै कसर वाकी नराखेको वताएका छन ।
त्यसै गरी कोरोनाले जिल्लाका हरेक विकास निर्माण र जनजिविकाको सवालमा समस्या परेको छ । यो सन्दर्भमा जिल्लाका आम गतिवीधिलाई अगाडी लान जिल्ला समन्वय समितिले सवैको सल्लाह अनुसार योजना वनाएर अगाडी जानपर्ने वताएका छन । यसको रोगथामको निमित्त सवै सरोकारवाला निकाय लागी पर्नुपर्ने वताएका छन ।
23,387 total views,4views today
कोरोना महामारी कोभिट १९ संग जुद्धाको अनुभुति
1,572 total views, 17 views today
6,246 total views, 17 views today